पिएचडी युवाको अगुवाईमा ‘रारामार्ट, बन्दैछ ‘ग्लोवल ब्राण्ड’:: Artha Dabali
पिएचडी युवाको अगुवाईमा ‘रारामार्ट, बन्दैछ ‘ग्लोवल ब्राण्ड’
जापान र नेपालमा आक्रामक सुरुवात, अमेरिकामा कम्पनी स्थापना
गरे के हुँदैन !
सफलता भाग्यमा होईन् कर्ममा हुन्छ ।
पिएचडी अध्ययनको लागि जापान पुगेर अध्ययनसँगै ईन्टरनेटमा आधारित व्यवसाय (ईकमर्श व्यवसाय)मा सफलताको सिँडी चढिरहेका ३ नेपाली युवाको कथा कम्ति रोचक छैन ।
ग्लोबल ई–कमर्शको दुनियाँमा अमेरिका पछिको दोश्रो प्रतिशप्रर्धी बजारका रुपमा रहेको जापानमा ई–कमर्श व्यवसाय स्थापना गर्नु र त्यसलाई टिकाएर अघि बढाउनु पक्कैपनि कम चुनौतीपुर्ण छैन ।
तर, चुनौतीलाई स्विकारेर अघि बढिरहेका छन ३ नेपाली युवा प्रकाशचन्द्र सापकोटा, जीवन अम्गाई र भरतसिंह नेगी ।
अम्गाई र नेगीले जापानको कोबे सिटीमा अवस्थित कोबे युनिभर्सिटिबाट अर्थशास्त्र र मेडिकल साईन्समा पिएचडी गरिसकेका छन भने सापकोटा ओसाका युनिभर्सिटीमा वित्तिय अर्थशास्त्रमा पिएचडी अध्ययन गरिरहेका छन ।
अध्ययनसँगै केही नयाँ र चुनौतीपुर्ण काम गर्नुपर्छ भन्ने सपनामा छन् यी तीन युवा ।
एक पाईलाबाट सुरु हुन्छ हजार माईलको यात्रा भने जस्तै, जन्मियो रारामार्ट अनलाईन सपिङ्ग ।
अम्गाई र नेगी व्यवसायीक अनुभवको दृष्टीले नयाँ थिए भने सापकोटाले जापान जानुअघि नेपालमा मिडिया, बिज्ञापन एजेन्सी, आईटी लगायतको व्यवसायमा करिब एक दशक अनुभव बटुलिसकेका छन् ।
कसरी जुट्यो लगानी ?
झण्डै ६ महिनाको गहन अध्ययनपछि औपचारिक रुपमा कम्पनी सुरु गर्ने अठोटसहित उनीहरुले पुँजी संकलनको लागि जापानको ओशाका, नागोया, टोकियो जस्ता सिटीहरुमा नेपाली लगानीकर्ता भेटघाट कार्यक्रम आयोजना पनि गरे । तर, करोड आम्दानी गरिरहेका नेपाली व्यवसायीहरुले उनीहरुलाई ५० हजार लगानी पनि पत्याएनन् ।
यसले आँफुहरुमा केही निराशा उत्पन्न गराएको उनीहरुको अनुवभ ताजै छ ।
तर, हिम्मत नहारी निरन्तर अघि बढिरहेको र हाल आफूहरुलाई केही नेपाली, जापानिज र अमेरिकन लगानीकर्ताहरुले साथ दिईरहेको बताउँछन् कम्पनीका संस्थापक निर्देशक प्रकाशचन्द्र सापकोटा ।
नाम कसरी रह्यो रारा मार्ट
उनका अनुसार उनीहरुले सयौं नामहरु मध्येबाट नेपालको प्रख्यात ताल रारालाई जोडिने गरी कम्पनीको नामाकरण गरे ‘रारामार्ट’ ।
प्रारम्भमा फेसबुकमा आधारित बिक्रीबाट प्रारम्भ भएको रारामार्ट स्थापना भएको १ बर्षपछि अनलाईन स्वरुपमा प्रारम्भ भएको हो ।
हाल जापानमा रारामार्ट डटको डट जेपीबाट आक्रामक बजार विस्तार भइरहेको छ ।
यससँगै रारामार्ट जापानको टे«डमार्क तथा प्याटेण्ट दर्ता गर्ने सरकारी निकायबाट अन्तराष्ट्रिय टे«डमार्कका रुपमा दर्ता भईसकेको छ ।
पहिलो बर्षको आकर्षक बिक्रीबाट हौसिएका उनीहरुले रारामार्टलाई नेपालमा समेत बिस्तार गर्ने सोच अनुरुप नेपालमा कम्पनी दर्ता गरे र उनीहरुलाई साथ दिए नेपालका प्रख्यात उद्योगी–व्यवसायीहरुले ।
नेपालकै उद्यमीको साथ
हाल रारामार्ट नेपालमा प्रख्यात उद्योगी प्रदिपजंग पाण्डे, युवा उद्यमी कुशल जोशी, केही मारबाडी समुदायका प्रख्यात उद्योगीहरु, नयाँ पुस्ताका मारबाडी युवाहरु र अन्य गरि करिब २० जना जतिको संलग्नता रहेको छ ।
नेपालमा झण्डै १ बर्षदेखि रारामार्ट डटकमको नामबाट आन्तरिक रुपमा परिक्षण प्रशारण भईरहेको रारामार्ट केही समयअघि बजारमा लाईभ भए पनि कुनै प्रचारबिना काम गरिरहेको थियो ।
सापकोटा भन्छन् ‘पुर्णतया प्रबिधिमा आधारित व्यवसाय भएको हुँदा प्राबिधिक पक्षको सफल परिक्षण नगरी बजारमा हल्ला गर्दा जस्तो सुकै जोखिम हुनसक्ने देखिएकोले केही ढिला गरी आएका हौं । अव हामी आक्रामक रुपमा अघि बढ्छौं ।’
नेपाली कम्पनीबाट धोका भएपछि हाल मुख्यरुपमा प्राबिधिक निर्माणको कार्य अमेरिकाबाट हुँदै आएको छ भने कम्पनीले नेपाल र जापानमा पनि ईनहाउस दक्ष आईटी ईञ्जिनियरहरु राखेर काम गर्दै आएको छ ।
जापानको रोक्को मिचीमा अवस्थित पार्कमा कोरिएको पहिलो बिजिनेश स्केचबाट सुरु भएको रारा मार्टको मुख्य बिशेषता भनेको सस्तोमा गुणस्तरिय बस्तुहरु बिक्री गर्नु रहेको छ ।
अमेजन, राकुतेन जस्ता बिलियन डलरका विश्वका अब्वल सपिङ्ग कम्पनीहरुको उच्च तहको प्रतिष्प्रर्धा रहेको जापानमा कम्पनी टिकाउनु निकै चुनौतीपुर्ण हुन्छ ।
जापानमा रारामार्टले पहिलो चरणमा जापानमा बस्ने बिदेशी नागरिकहरुलाई लक्षित गरिहेको छ र निकै कम मार्जिनमा सामानहरु बिक्री गरिरहेको जनाएको छ ।
रारामार्टले जापानमा मुख्य रुपमा मोवाईल, इलेक्ट्रोनिक्स, कपडा, जुत्ता जस्ता सामानहरुको बिक्री तिब्ररुपमा बिस्तार गरिरहेको छ ।
खासगरी एप्पल ब्राण्डका घडी, मोवाईल, ल्यापटपहरुको बिक्रीको हिस्सा सबैभन्दा बढि रहेको र त्यसपछि महिलाहरुको कपडाहरु रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
रारामार्टले यी बस्तुको मुल्यलाई नै आफ्नो पहिलो हतियार बनाईरहेको छ । तर, रारामार्ट जापानको बिदेशी भेण्डरहरुको प्रडक्टहरुमा छिटो डेलिभरी गर्न नसक्नुमा भने आँफुहरुको कमजोरी छ ।
जापानको सबैभन्दा ठुलो जापान पोष्ट बैंक, डिएचएल, फेडएक्स जस्ता अन्तराष्ट्रिय सिपिङ्ग कम्पनीहरुहरुसँग एक्सप्रेस डेलिभरी टाईअप मेकानिजमको लागी प्रयत्न गरिरहेको छ ।
रारामार्ट नेपालले अनलाईन सपिङ्ग बजारको मुख्य कमजोरीलाई शुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी त्यस अनुसारको रणनीति तर्जुमा गरि अघि बढाएको दावी कम्पनीको छ ।
‘रारा ईन्कर्पोरेशन (नेपाल) प्रा.लि.’ का अध्यक्ष तथा प्रख्यात उद्योगपति प्रदिपजंग पाण्डे भन्छन्, ‘सुचना प्रबिधिमा आधारित व्यवसाय सबैका लागी अनिवार्य भइसकेको अवस्थामा आफुहरुले पनि प्रबिधिमा दक्ष युवाहरुसँग सहकार्य गरको हो । उनका अनुसार रारामार्टले पहिलो चरणमा काठमाण्डौ र ललितपुरमा २४ घण्टे निशुल्क डेलीभरीको योजना कार्यान्वयन गरेको छ ।
निशुल्क डेलिभरी र २४ घण्टा भित्रै डेलिभरी दिने पहिलो अनलाईन सपिङ्ग कम्पनी भएको अध्यक्ष पाण्डेले दाबी गरे ।
उनले थपे, ‘ हामीले काठमाण्डौ रिङ्गरोड बाहिर र उपत्यका बाहिरको हकमा पनि रारामार्टले अन्य सपिङ्ग कम्पनीहरुको तुलनामा सबैभन्दा कम मुल्यमा सबैभन्दा छिटो डेलिभरी सेवा प्रदान गर्दछौं ।
नेपालसँगै यतिबेला अमेरिकामा सेवा बिस्तारको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको कम्पनीको दावी छ ।
जस्को फलस्वरुप केही महिना अघिमात्र अमेरिकामा कार्यरत नेपाली मुलका अगुवा व्यवसायीहरुको सहभागितामा अमेरिकाको टेक्सास्मा ‘रारा युएसए कर्पोरेशन’ नामक कम्पनी स्थापना भईसकेको छ ।
रारा ग्रुपका निर्देशक प्रकाशचन्द्र सापकोटाका अनुसार कम्पनीले प्रारम्भमा केही समय क्राउड फण्डिङ्गको मोडालिटीमा फण्ड कलेक्सनको काम गर्नेछ र सन् २०२० को अन्तसम्ममा अमेरिकाबाट वल्र्डवाईड ई–कमर्श सपिङ्ग साईट संचालनमा ल्याउने छ ।
उनका अनुसार अनुसार रारामार्टले सन् २०२१ को अन्तसम्ममा ईण्डियामा समेत कम्पनी स्थापना गरिने बताए ।
कम्पनीका अर्का निर्देशक डा. भरतसिंह नेगीले जापान र अमेरिकामा रारामार्टको स्थायित्वसँगै भारत लगायतका बिकाशोन्मुख तथा अल्पबिकशित देशहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायीक विस्तार रणनीति तर्जुमा गरिने बताए ।